Iziteshi samandla zenzelwe imishini umile futhi isevisi amathuluzi uhlangothi, usebenza ngendiza onomfutho. umakhi ezifuywayo "Calibre" inikeza uhlu olubanzi lamafutha uwoyela-free onobuhle, ukuvumela ukuba ukhethe afanele kuhambisane netinhloso. Ngokwesibonelo, e-Internet kulula, futhi amayunithi iyasilela ngoba spray izibhamu, iziteshi qinile eyenzelwe kweqembu imishini industrial. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo kanye nabasebenzisi ukubika anhlobonhlobo izesekeli, ezidayiswa ngu "Calibre". Samandla lomsebenzi elilungile kufanele inikezwe enezihlungi ekhethekile, amafutha, adapters, amapayipi amanzi, nezinye izengezo ukuthi ingatholakala amasethi khona izinto eziyisisekelo.
Amafutha kusukela compressors uwoyela-free zihlukile?
Noma yimuphi iyunithi compressor izitshela ukuthi ngesisekelo technical ngaphakathi izindlu. Ngokuhamba kwesikhathi, iningi izingxenye zensimbi ezisebenza ngaphansi kwezimo wokusebenza njalo, ukugqoka, futhi ngenxa yalokho, ulahlekelwa izinga layo. Ukuvimbela bafake ngokushesha futhi amafutha asetshenziswa. Umsebenzisi kugcwalisa Ukwakheka esitsheni akhethekile, okuvela kulo mshini inikezwe ezindaweni ezibucayi kakhulu friction. Lokhu kuqinisekisa UKUQINA amafutha amayunithi "Calibre". I compressor ezisebenza ngaphandle Lubrication, kusikisela ukusetshenziswa ukugxusha izakhi zawo, ogama izici angaphansi bafake kancane. Yiqiniso, ukususa isidingo njalo kwe-Gulf uwoyela modifiers ibonakala kukhanga kakhulu, kodwa compressors yalolu hlobo uvame uwoyela nozakwabo ngokuya kwamandla, ukuqina kanye nokusebenza.
Amafutha compressor "KMC-1600"
Ngokuvamile ingxenye compressors kuyinto isilinganiso ngokuya imodeli ukusebenza, okungenzeka lisetshenziswe kumnotho wasekhaya, futhi workshop ezikhethekile. Umthamo amandla 1.6 kW, kulekelelwa 50 ilitha umamukeli, inikeza isamba elanele emoyeni onomfutho ngekwetinhloso letibanti enkulukazi amathuluzi. Uma amandla lesi imodeli akwanele, kunengqondo ukuba banake amafutha compressor Coaxial "Calibre" e ukuguqulwa 2.1 kW. Kwenzeka okufanayo nasesikhathini nemingcele eziyisisekelo ngale nguqulo, kodwa has a esikhulu amandla reserve isinyathelo, okuyinto kwanele ivolumu emoyeni elikhiphe oda 270 l / imiz.
Amafutha compressor "KMK- 1000/8"
Lokhu ezinye zezindlela okuphambene izinguqulo ezandulele, ngoba imodeli yenzelwe ngqo nezidingo zasekhaya. Ikakhulukazi, usebenzisa lo mshini ongenza imisebenzi ejwayelekile nge air onomfutho, kuhlanganise umsebenzi upende, nokususa ukungcola nokugqwala ezinengilazi futhi t. D. Ngokusebenzelana izinga akuyona ukhetho best for ukusetshenziswa professional, njengoba umthamo 126 kuphela l / iminithi . Nokho, uma izindleko zokukhiqiza yenkinga melkoformatnogo zisebenzisa imishini womoya kanye compressor "Calibre KMK" kule ukusebenza angaxhumana. Njengoba amandla ayo ongaphakeme izilinganiso ezingaba is offset ngesisindo ongaphakeme futhi compactness.
Amafutha-free compressor "KB 1100m"
Kulokhu, futhi kubhekwe imodeli entry level, kodwa kunezinzuzo ezibalulekile eziningana. Okokuqala, i-compressor uwoyela-free "Calibre KB 1100m Master" has ilungiselelo elikhethekile yokugcina izesekeli elisetshenziswa amagalaji. Okwesibili, lokhu ukuguqulwa ifakwe isiteji ergonomic ukuhambisa, kangangokuthi ngisho umuntu oyedwa kalula ukubhekana naso.
Kepha amandla nokusebenza, izidingo ezikhethekile kule imodeli ukwethula hhayi zinkulu. Ucingo ezihambayo endaweni ukusebenza ngenjongo kokwenza imisebenzi elula - okubaluleke kakhulu, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo, "Calibre" Onjiniyela ukubala. I compressor ukhiqiza l 126 kuphela / imiz., Yikuphi kungase kwanele kuphela ukusebenzisa kwayo ekuphileni kwansuku zonke.
Amafutha-free compressor "KB 1200m"
Nasi inguqulo ethuthukisiwe ye compressor langaphambilini, okuyinto agcinwayo ezinye nesithunzi saso. Le nguqulo has a injini elinamandla kakhulu, ngakho-ke kungaba okunikezwe operation akabangeli nje kuphela emnothweni yasekhaya. Kuyaphawuleka ukuthi abaklami abahlinzeke iyunithi nge Izilawuli ergonomic, ngakho ngokuya egqoke induduzo izikhalazo cishe ayikho. Nokushesha, futhi ukuhamba kusese izimfanelo engcono salolu chungechunge. Ngu emoyeni amavolumu umphumela kuzwakale kushaqisa kancane ephakeme - 161 l / imiz. Ngokuvamile, kuyafaneleka egcizelela eziningi kangaka zikamoba kanye ukusebenza kule yunithi "Calibre". I compressor futhi ukusetshenziswa ezahlukene futhi ukonga amandla. Kukholakala ukuthi onomfutho emoyeni esiteshini mongering ifomu izihloko ezinkulu ku izindleko kagesi, kodwa lokhu imodeli ubuhle ngokugcwalisa ukonga kakhulu.
Ngezikhathi hlola ubuqotho izindlu igibele kanye izici nemisebenzi namandla iyunithi. Uma kuziwa onobuhle mafutha kufanele sibuyekezwe njalo uwoyela, kokunezela kulo futhi okufakiwe ngempumelelo, uma kunesidingo. Futhi, ukuba senkonzweni bese Kwezinye izingxenye compressor "Movement", okuyinto zivame ukumelela alokuncane nokufakwa, adapters, O-izindandatho izingxenye ezinengilazi lokuvikela injini. Kubalulekile wazi ukuthi umsebenzi olunzulu ngezinto olwalwenza ababezithola phansi benze amathuluzi womoya akuhileli bafake okusheshayo yezingxenye obusebenzayo ubuchwepheshe. Ngakho-ke, ngemva 50-60 amahora wokusebenza kudingekile ukwenza ukuhlolwa olunzulu ngokugcwalisa kulandzelana nekuhlunga tinsita.
I-Russian emakethe ubuswa yasekhaya compressors imishini. Lokhu kungenxa hhayi kakhulu izici ikhwalithi umkhiqizo njengoba isisebenzi esamukelekayo price tag for ezahlukene abasebenzisi. Ikakhulu, i-compressor "Calibre CB 1100m", ukubuyekezwa izinga lobuchwepheshe ukuthi ubuye ngempela aphakeme, angathengwa ayizinkulungwane 3.5 kuphela. Deda. Ukuze uqhathanise, ezifanayo ukusebenza izici imodeli kusuka abakhiqizi American noma European kungadla ezingaphezu kuka 5 izinkulungwane Nokho, uma iqhathaniswa compressors nezinqubo zemininingwane yezinye izinkampani Russian, umehluko intengo kuyoba esincane .. Kuyini imikhiqizo ye "Calibre" uhlukile kubo? Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa abathengi ngqo, khona-ke ukuza wahlala isikhathi eside kuqhame, izingxenye ikhwalithi Ergonomics yesimanje.
"Mitsubishi Evolution-9" - nomzingeli okusheshayo emomotheka uhlobo
Inqubomgomo basekhaya nabamazwe angaphandle Olega Veschego